मौरिससले ल्यायो नियमः थरको पहिलो अक्षरअनुसार मानिसहरु खाद्यान्न किन्न निस्कन पाउने !
कोरोना त्रासका कारण विश्वभर नयाँ नयाँ उपाय अपनाएर यसको रोकथाम गर्ने प्रयास गरिएको छ । अब मौरिससमा पनि मानिसहरुले अत्यावश्यक खाद्यान्न किन्नका लागि एउटा विशेष नियम पालना गर्नु पर्ने भएको छ । त्यहाँको स...
मुम्बईका विक्की सिंह यति धेरै खुसी थिए कि उनको परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमन हुँदै थियो । उनकी पत्नी गर्भवती थिइन् । त्यसैले उनी खुसी थिए । तर, यहीबीच विश्वमा कोरोनाको महामारी फैलियो । भारतमा पनि यसल...
‘मदिरा प्रेमी’को चर्को मागसँगै लकडाउनमा पनि भारतमा मदिरा पसल खुल्दै !
भारतको छत्तिसगढ सरकारले अब त्यहाँ बन्द भएका मदिरा पसल खोल्ने भएको छ । छत्तिसगढका एक अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मदिरा प्रेमीका कारण सरकारले यो निर्णय लिएको हो । २३ मार्चदेखि त्यहाँ भएका मदिर...
३० प्रतिशत कोरोना संक्रमितमा देखिएको छैन कुनै लक्षण, यही सबैभन्दा बढी खतरानक
विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनमा कोरोना भाइरसबारे गरेको पछिल्लो अध्ययनलाई सार्वजनिक गरेको छ । अनि यो अध्ययनबाट आएको निष्कर्ष हामीलाई थप सचेत बनाउने खालको छ । किनकि रिपोर्टअनुसार कोरोना संक्रमणको जति मुद्दाहर...